सु’हा’गरा’तमा सासुले ४ वटा छोरालाई बुहारीको कोठामा पठाएपछि…. |
September 9, 2021 adminLeaveaComment on सु’हा’गरा’तमा सासुले ४ वटा छोरालाई बुहारीको कोठामा पठाएपछि….
एजेन्सी । महाभारतमा द्रोपदीको ५ पति रहेको उल्लेख गरिएको छ । पाँच पाण्डवका एक श्रीमती द्रोपदी दिइन । यो धार्र्मीक ग्रन्थ महाभारतमा पढ्न सकिन्छ ।तर भारत दिल्लीको छेउछाउ उत्तर प्रदेशको गाजियाबाद शहरमा पनि यस्तै घटना भएपछि बुहारी प्रहरी कार्यालय पुगेकी छन् । सासुले विवाहकै रात आफ्ना चार छोरालाई बुहारीको कोठामा पठाएकी थिइन् ।चार दाजुभाई मध्य एक जनासंग उनको विवाह भएको थियो । जो संग विवाह भएको थियो उनका दुई दाई र एक भाई थिए।
सुरुमा विवाहका लागि कान्छो छोरालाई देखाइएको थिया तर विवाह पनि उनका दाईसंग गराइयो ।विवाह पछि, सासुले उनलाई आफ्ना चारजना छोराहरूसँग स’म्ब’न्ध रा’ख्न बाध्य पारिन् । जब उनले आफ्नो पति बाहेक अरू कसैसँग स’म्ब’न्ध रा’ख्न इन्कार गरिन् उनी माथि ज’ब’रज’स्ती गरियो। प्रहरीले मु’द्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
यस्तो समस्या भोगेपछि उनी विवाहको दुई महिना पछि माइत फर्किइन् । बेहुलीले गाजियाबादका डीएमलाई गुनासो गरिन् । प्रहरीले उनका श्रीमान् र सासुलाई पक्राउ गरेको छ ।बेहुलीले प्रहरीसंगको बयानमा श्रीमानका दुई जना जेठा र एक कान्छो भाइ छन् र उनका दुवै दाजुहरु विवाहित छन्। उनको विवाहको दोस्रो दिन,
उसकी सासुले दुई जेठाजुसंग स’म्ब’न्ध रा’ख्न लगाइन् ।दुलहीले विरोध गरीन् र उनी कोठाबाट बाहिर आईन्। उनलाई या’त’ना दिइयो । उनलाई माइवाट ट्रक र बाइक किन्न ४ लाख रुपैयाँ ल्याउन द’वा’व दिए ।
१० लाखमा भनेजस्तै घडेरी काठमाडौं शहरमा।नसोच्ने गरी घट्यो घडेरीको मूल्य!
कुनै पनि शहरमा १०० भन्दा धेरै संक्रमित देखिए कडाइ गरिने।लकडाउन हुने यस्तो छ संकेत।भर्खर बाहिरिएको सुचना हेर्नुहोस
आयो सिलिन्डरको नया मूल्य,ग्राहकवर्गलाइ यति सस्तोमा ग्यास उपलब्ध हुने,पुरा पढ्नुहोस